आँचलसंग बिहे गरेका उदिपलाई झड्का: फिलिपिनी पुर्व प्रेमिका र बच्चासहितको तस्विर बाहिरियो ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
आँचलसंग बिहे गरेका उदिपलाई झड्का: फिलिपिनी पुर्व प्रेमिका र बच्चासहितको तस्विर बाहिरियो !
केही साताअघि विवाह बन्धनमा बाँधिएका अभिनेत्री आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठलाई लिएर गसिपहरु चलिरहेका छन् । उनीहरुको विवाहमा देखिएको तडक भडक देखि पुर्व प्रेमिकाको बारेमा हिजो आज निक्कै चर्चा भईरहेको छ ।
यसै बीच उदिपको पुर्व प्रेमिका भनिएकी फिलिपिनी युवतीको तस्विर सामाजिक संजालमा सार्बजनिक भएको छ । प्रेमिकाको मात्र हैन तस्विरमा एउटा शिशु पनि देखिन्छ । तर ति शिशु उदिप र उनको प्रेमिका कै हो वा अन्य कसैको हो भन्ने भने स्पष्ट छैन । जुन शिशुसंग उदिप पनि संगै छन । तस्विर कहा कसले सार्बजनिक गर्यो त्यो भने खुलेको छैन । तर रिलेसनसिपमा मात्र रहेको बताउने उदिपलाई यो तस्विरले फेरी टाउको
दुखाएको छ ।
पोखराबाट संचालित समाचारपाटी डक कमले यो तस्विर सार्बजनिक गरेको हो ।